Famaritana manokana: "tontolon'ny Desktop" sy "mpitantana Window". | Avy amin'ny Linux
Famaritana manokana: "tontolon'ny Desktop" sy "mpitantana Window".
En GUTL Mahita lahatsoratra somary mahaliana aho (indrindra ho an'ireo mpampiasa vaovao) izay nahitan'ny mpanoratra azy, namana Delio Orozco González, rehefa avy nanao fikarohana kely izy mba hahalalana ny fahasamihafana misy eo amin'ny Desktop Environment sy Window Managers.
1 Famaritana manokana: "tontolon'ny Desktop" sy "mpitantana Window".
Nosoratan'i Delio Orozco González
Hatramin'izao dia tsy dia nazavaiko tsara ny mahasamihafa ny teny iray sy ny iray hafa ary raha milaza amiko ny traikefa fa ny fisalasalana toy izany dia mety hanafika na efa nanafika ny sasany amin'ireo mpiara-miasa aminay, omeko ny tenako ny fanajana ny faritry ny hetsika: fizarana; noho izany, ity misy fikarohana kely momba ny referansa izay hanampy antsika hahatakatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny "Desktop environment" sy ny "Window manager".
Araka ny Wikipedia, ny tontolon'ny birao (DE raha fintinina) dia andiana rindrambaiko hanolorana ny mpampiasa solosaina fifandraisana mahay sy milay. Izy io dia fampiharana mpampiasa interface graphique izay manolotra fidirana sy toerana fanamboarana, toy ny baraovola sy fampidirana anelanelan'ny rindranasa misy fahaiza-manao toy ny drag and drop.
Ny tontolo Desktop amin'ny ankapobeny dia tsy mamela ny fidirana amin'ireo endri-javatra rehetra hita ao amin'ny rafitra fiasa, noho ny tsy fisian'ny interface interface. Fa kosa, ny interface command line nentin-drazana (CLI) dia mbola ampiasaina raha ilaina ny fanaraha-maso feno ny rafitra fiasa amin'ireo tranga ireo. Ny tontolon'ny birao mazàna dia misy sary masina, varavarankely, bara fanaovana fitaovana, lahatahiry, sary an-tsary ary widget misy amin'ny birao.
Amin'ny ankapobeny, ny tontolon'ny birao tsirairay dia miavaka amin'ny fisehoany sy ny fitondran-tenany manokana, na dia misy aza mazàna manahaka ny toetran'ireo birao misy. Ny tontolon'ny birao maoderina voalohany natao varotra dia novolavolain'i Xerox tamin'ny taona 80. Amin'izao fotoana izao ny tontolo malaza indrindra dia ny natolotry ny fianakavian'i Windows, na dia misy aza ny hafa toa ny Macintosh (Classic sy Cocoa), na koa loharano misokatra (na rindrambaiko maimaim-poana) toy ny GNOME, KDE, CDE, Xfce o LXDE, matetika ampiasaina amin'ny fizarana Linux o BSD. (2)
Manomboka amin'ity fotoana ity dia mipetraka ny fanontaniana: inona avy izany ny "Window Manager"? Araka ny loharanom-baovao ihany, ny manager window dia Programme Computer izay mifehy ny toerana misy sy ny fisehoan'ny windows eo ambanin'ny rafitry ny varavarankely ao anaty tambajotram-pifandraisana mpampiasa. hampitomboina, hamindra, hitombo ary hitahiry lisitr'ireo varavarankely misokatra. Matetika ihany koa ny mpitantana ny varavarankely dia mampiditra singa toy ny: ny haingon-trano eo am-baravarankely, ny tontonana, ny mpijery birao virtoaly, ny sary masina ary ny rindrina. (3)
Ny sehatr'asa Windows sy Mac OS X dia manolotra mpitantana varavarankely manara-penitra ireo mpivarotra azy ary tafiditra ao anatin'ny rafitra fiasa mihitsy. Etsy ankilany, ny rafitra X Window an-tsary, malaza amin'ny sehatry ny Unix sy ny rafitra mitovy amin'izany, toy ny GNU / Linux, dia mamela ny mpampiasa hisafidy amin'ireo mpitantana maro. Ny mpitantana ny varavarankely dia samy hafa amin'ny lafiny maro, toy ny fisehoana, ny fanjifana ny fahatsiarovana, ny safidy ampanjifaina, ny birao birao maro na virtoaly ary ny fitoviana amin'ny tontolo birao misy, ankoatry ny hafa. (5)
Anisan'ireo "Window manager" fanta-daza indrindra ny AfterStep, FVWM, AmiWM (Friend Windows Manager), Blackbox, CTWM, Fanazavana, Fluxbox (nalaina avy amin'ny Blackbox kinova 0.61.1), IceWM, Kwin (ny mpitantana varavarankely izay ampiasain'i KDE), Metacity (mpitantana ny fikandrana amin'ny kinova Gnome), Openbox (mifototra amin'ny Blackbox ary mpitantana varavarankely LXDE), VTWM, hazandrano ary maro hafa. (6)
Ary hamita fanambarana. Rehefa nanomboka teo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux aho dia nampiasa ny Mazava ho azy fa Gnome sy KDE. Avy eo, nitady fampisehoana, nifindra tany XFCE sy LXDE aho; farany, miaraka amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny rafitra sy ny mety ananany, nifindra tany amin'ny Enlightenment aho ary faly noho ny antony iray: afaka mamorona sy manova aho, izay raharaham-barotra voajanaharin'olombelona, ​​hoy i José Martí; Mandritra izany fotoana izany dia afaka nanamboatra ny UI (User Interface = User Interface) aho hifaneraserana amin'ny rafitra fiasako: Debian 6.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Famaritana manokana: "tontolon'ny Desktop" sy "mpitantana Window".
Tena mahaliana ho an'ireo vao manomboka mandinika an'ity lohahevitra ity, ary maninona no tsy atao, mba tsy hanadinoantsika ireo izay efa mahalala ^^
Tena tsara. Mbola misy ny olona tsy mahalala ny mahasamihafa azy. Tiako ilay ampahany ilazanao hoe "Kwin (mpitantana ny varavarankely izay ampiasain'ny KDE), Metacity (mpitantana ny varavarankely misy ny kinova Gnome)", heveriko fa miaraka amin'ireo ohatra ireo dia azonao atao tsara kokoa ny manavaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny tontolon'ny birao sy ny mpitantana ny windows. .
hazavaina tsara, zavatra iray izay misafotofoto mora foana izany rehefa tsy mahazatra anao izany
Io fahazavana io dia mbola tsy birao hatramin'ny ny kinova e17?
Raha tsy izany dia tsy azoko indray ny atao hoe DE sy WM (!) Ary tsy misy.
Io no hidiranao amin'ny tany tsy hazavaina amin'ity lahatsoratra ity. Ho ahy ny "birao" dia tsy mitovy amin'ny "tontolo desktop". E17 dia tsy tontolon'ny birao, mpitantana varavarankely tena feno izay azo ampiasaina ho birao. Rehefa miresaka momba ny birao ianao dia mieritreritra ny Unity, GNOME Shell, Plasma, E17, ...
Ary io fahazavana io dia tsy mitovy amin'ny e17?
fahazavana = e17?
ARY? Ao amin'ny hevitro no soratako fa ny "desktop" dia tsy mitovy amin'ny "tontolo desktop". Heveriko fa mbola tsy namaky azy tsara ianao.
Rehefa manatsara / manampy ny fampiharana fototra sasany ny E17 ary rehefa mamorona rafitra izany dia ho tontolon'ny birao feno izy.
Araka ny FAQ fahazavàna:
Manazava izany amin'ny: http://www.enlightenment.org/?p=about/e17
Toa tsy te ho lasa zavatra toa an'i GNOME na KDE ry zareo.
Aona! Tsy hita ny fanendrena. Averiko aminao ity:
Inona marina no tianao holazaina amin'ny hoe "Enlightenment DR17 dia ho akorandriaka amin'ny birao?"
Midika izany fa ny DR17 dia hanambatra ny endri-javatra amin'ny manager windows ary manager file. Izy io dia hanome singa GUI mifangaro tsara ho an'ny fitantanana ireo singa ao amin'ny birao, na ny fisie na ny windows. Tsy * tsy * midika akory izany fa DR17 dia ho lasa rafitra fampiharana hafa toa an'i Gnome sy KDE.
TPT !! Okay ! Heveriko fa nanjary mazava io… mpankafy fahazavana aho, na dia miaiky aza aho fa mbola tokony handeha io, saingy manantena aho fa hivoatra be.
Na dia tsara aza, izao nikitika ny olan'ny akorany ... ka hitantsika toy izany? toy ny "akorandriaka"?
Nanjary nalaza be ny akorandriaka.
Raha manontany ahy ianao dia malaza foana ny akorandriaka, manana namana Arzantina aho izay miaina izany mitady ny akorandriaka ... XD
Any Espana dia matetika ny fihazana bitro.
TPT !!! XD
Hataoko ao an-tsaina izany. Tsara! Tsapako izao fa tsy maninona na firenena aiza ianao, na rafitra miasa ampiasainao, mainka raha tianao ny DE na WM ... amin'ny farany, mitovy daholo isika rehetra
Eto Meksika dia antsoina hoe: «Mandoa vola amin'ny Karemy» XD ianao
(Na dia somary tsy mandeha amin'ny lohahevitra aza io dia tsy hitako ny fomba fiteny mety. Zorry!)
Araka ny Bodhi Linux, mihalavitra kokoa ny tsipika:
Na izany na tsy izany. Angamba amin'ny tontolon'ny birao amin'ny ho avy dia hampiditra ny mpitantana ny varavarankely na ny mpitantana azy ireo dia hampiditra ireo asa efa noheverina teo amin'ny tontolo iainana. Ho an'ny mpampiasa farany dia mety tsy maninona izay eritreretiko.
Fantatro ny tsy fitovizany, mijery ity lahatsoratra ity aho ary mahatsapa fa tsy mazava ny halehiben'ny DE sy ny halaviran'ny Window Manager.
Tahaka ny te hanazava ny maha samy hafa ny rano sy ny menaka ary mifikitra fotsiny amin'ny hoe samy ranon-javatra izy roa.
Ny iray amin'ireo tsy fitovizany dia ny tontolon'ny birao mamela anao handrindra ny fitaovan'ny solo-sainanao raha tsy manao izany ny mpitantana ny varavarankely, ary tsy maintsy mandeha any amin'ny terminal ianao.
Amin'ny fotoana apetranao amin'ireo rindranasa mamela ny fikirakirana ny fitaovana avy amin'ny maody sary, dia avadinao ho toy ny tontolon'ny birao ny manager window. Noho izany dia tonga ny fisavoritahana amin'ny E17; nanomboka ho mpitantana varavarankely fa nivoatra.
Ny tontolon'ny birao rehetra dia misy mpitantana varavarankely, raha toa kosa ny mpitantana varavarankely dia rindrambaiko farafahakeliny takiana mba hifandraisana amin'ny mpizara X ary handefa fampiharana sary.
Eny, eto ve tsy mety ny milaza fa e16 dia mpitantana varavarankely ary e17 dia efa tontolon'ny birao? Miaraka amin'ny Enlightenment (e17) dia manamboatra ny fitaovana (fikirana fikirakirana, fitantanana fitaovana, manana mpitantana fampiharana voalohany, ankoatry ny hafa).
Ho ilaina amin'ny mpampiasa vaovao marobe na ireo izay mbola tsy mahatakatra tsara ny fahasamihafana.
Tsotra kokoa noho ny feony io, ny mpitantana ny varavarankely dia mitantana windows, ary ny tontolon'ny birao dia mampiasa ny manager windows ary manana ny fampiharana azy hanao zavatra sasany izay tsy hain'ny mpitantana varavarankely irery. Mikasika ny fahazavana: «Ny fahazavana dia tsy mpitantana varavarankely fotsiny ho an'ny Linux / X11 sy ny hafa, fa koa trano famakiam-boky iray manontolo hanampy anao hamorona interface tsara amin'ireo mpampiasa miaraka amin'ny asa kely noho ny manao azy amin'ny fomba taloha sy miady amin'ireo fitaovana nentim-paharazana ', Izay ny fahazavana XD.
Master dia hoy izy:
Mamaly an'i Master
Vaovao aho ary tsy nahalala.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Linux Mint 14 Nadia
Richard Stallman dia miantso ny spyware an'ny Ubuntu